ချစ်မင်းထွန်း Archives > Page4of5> မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / Tag Archives: ချစ်မင်းထွန်း (page 4)
Tag Archives: ချစ်မင်းထွန်း
ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ချိန် AA နှင့် MNDAA ရှိမှန်းမသိသဖြင့် NCA တွင်ပါဝင်ခွင့်မပြုဟု ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းပြော
September 15, 2015 သတင်း 0
ချစ်မင်းထွန်း – သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရစတက်လာစဉ် တစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA နှင့် မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တို့ရှိကြောင်း အစိုးရမသိရှိသောကြောင့် NCA တွင် ပါဝင်ခွင့်မရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC ဒုဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောသည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် နိုင်ငံတကာအသိသက်သေ UN အပါအဝင် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံကို ဖိတ်ခေါ်ထား
September 13, 2015 သတင်း 0
ချစ်မင်းထွန်း – တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်(NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် နိုင်ငံတကာ အသိသက်သေများအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ UN အပါအဝင် နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သတင်းရသည်။
KIO အနေဖြင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဟု ဗိုလ်ချုပ်အင်ဘန်လပြော
အစိုးရဘက်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA ကို အောက်တိုဘာလ ပထမအပတ်ထဲတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြရန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO အနေဖြင့် NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ် အင်ဘန်လ ကပြောသည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက စစ်ဘက်နှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာများ အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု MPC ပြော
September 12, 2015 သတင်း 0
– တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပါက ၁၄ ရက်အတွင်း အကောင် အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအစည်းအဝေး JICM ခေါ်ယူကာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာများကို အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလျှင်လည်း လုံးဝအပစ်ရပ်သွားမည့်အခြေအနေမရှိနိုင်သေးဟု MPC ပြော
September 11, 2015 သတင်း 0
ချစ်မင်းထွန်း – တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလျှင်လည်း လုံးဝ အပစ်ရပ်သွားမည့်အခြေအနေမရှိနိုင်သေးကြောင်း မြန်မာ
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးပါဝင်ရေးမှ ခွဲထွက်သွားရန် အစီအစဉ်မရှိဟု NMSP ဥက္ကဌပြော
September 10, 2015 သတင်း 0
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်(NCA)လက်မှတ်ရေးထိုး နိုင်ရန် အစိုးရနှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနေကြရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို သတ်မှတ် နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေဖြင့် အားလုံးပါဝင်ရေးမှ ခွဲထွက်သွားရန် အစီအစဉ်မရှိဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP ဥက္ကဌ နိုင်ထောမွန်က ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရန် သမ္မတအဆိုပြု
ချစ်မင်းထွန်း – နိုင်ငံတော်သမ္မတအမှူးပြုသော အစိုးရအဆင့်မြှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များတို့ ယနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး
MNP မုဒုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မိလေးမွန် (အင်တာဗျူး)
September 6, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
ချစ်မင်းထွန်း မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? ဖြေ-ဆရာမတို့အနေနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိလို့ပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို
ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း-ရေး(၁) ကိုယ်စားလှယ်လောင်း MNP ပါတီ
September 1, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
ချစ်မင်းထွန်း မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? ဖြေ-ကျွန်တော် ၁၉၉၀ ကတည်းက ရေးမဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှာ ကျွန်တော် အရွေးချယ် ခံခဲ့တယ်။အနိုင်ရ
ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး-ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ချောင်းဆုံ(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်း
August 28, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး 0
ချစ်မင်းထွန်း မေး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘာကြောင့် အရွေးချယ်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ? ဖြေ- အဓိက က လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးရဲ့အခင်းအကျင်းမှာ လူထုကိုယ်စားပြုမှုက တအား အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ ဒီတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဒေသရဲ့အကျိုးကို ကိုယ်စားပြု